ऋणको पासो थापेर सामूहिक बलात्कार ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति ३० मंसिर २०७६, सोमबार २१:४४ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । एकातिर श्रीमानले छाडेर हिँडेको पीडा, अर्कोतिर सानी छोरीसँग आफूले हातमुख जोर्नुपर्ने बाध्यता । सुखद दाम्पत्य जीवनको सपना बुनेर दाङबाट काठमाडौं आएकी ३० वर्षीया अनिता (नाम परिवर्तन) संंकटमा थिइन् ।
छोरीसहित बालाजु आएकी उनकी उनको अवस्थाबारे रोमराज पुतुवार र लाले गुरुङ जानकार थिए । श्रीमान हुँदा नजिकै बस्ने ३९ वर्षका रोमराज र ४९ वर्षका लाले बेलाबेला कोठामा आउजाउ पनि गर्थे, त्यसले चिनजान पनि थियो ।
हातमुख जोर्न नै समस्या आइपरेपछि अनिताले उनीहरुलाई नै आफ्नो सम्झिइन् ।
रोमराजसँग केही हजार ऋण लिएर आफ्नो दुःख टारिन् । तर त्यही ऋण उनका लागि गलपासो बन्यो ।
उनले कमाएर ऋण तिर्न सकिनन् । रोमराजले पैसा मागिरहे । २१ मंसिरमा कोठामा आएका उनले अनौठो प्रस्ताव राखे, शारीरिक सम्बन्ध राख्न दिए पैसा फिर्ता दिनु पर्दैन ।
अनिताले केही सोच्न पनि सकेका थिइनन्, रोमराजको आफ्नो यौन तृणा मेटिहाले । रोमराज त्यतिमै रोकिएनन्, फेरि आउँदै जबरजस्ती सम्बन्ध राख्न थाले । रोमराजको पछि लागेर लाले पनि आए र बलपूर्वक यौन सम्बन्ध राखे ।
अनिता श्रीमानबाट पीडित भएको भन्दै शुक्रबार एक गैरसरकारी संस्थाको सम्पर्कमा पुगिन् । काउन्सिलिङका क्रममा उनले आफूमाथि सामूहिक बलात्कार समेत भएको खुलाइन् । त्यही संस्थाको सहयोगमा उनले महानगरीय प्रहरी वृत्त, बालाजुमा उजुरी दिएकी छन् । र, रोमराज र लाले पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ परेकालाई मंगलबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा उपस्थित गराएर म्याद थप गरी विस्तृत अनुसन्धान थालिने बालाजुका डीएसपी बालनरसिंह राणाले बताए ।
होमो सेक्स के हो ? किन भए प्रहरी होमो सेक्सले हैरान ?
काठमाडौं । लामो समयसम्म सहमतिमै यौनसम्बन्ध राख्दै आएका स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बद्ध दुई पुरुषबीच असमझदारीपछि घटना ‘बलात्कारी’को आरोप-प्रत्यारोपसम्म पुगेको…
वाकोट । पासाङल्हामु राजमार्गको ककनी गाउँपालिका–४ चौतीसकिलो भन्ने स्थानमा गएको पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको छ ।
शुक्रबार राति गएको पहिराले…